online trading system(online trading system) in Bizshala: Business, economic and financial news of Nepal -
मोक टेस्टिङ्गको अन्तिम तयारीमा नेप्से, लगानीकर्ताले के पाउँछन् सुविधा ?
-भक्तराज रसाइली काठमाण्डौ । नेप्सेले सेयर कारोबार प्रणालीमा अन्तर्राष्ट्रिय पथ पछ्याउँदै पूर्ण अनलाइन प्रणालीअनुसार कारोबार गर्ने भएसँगै सेयर बजारमा अनलाइन प्रणालीको तिर्खा एकाएक बढेको छ । विभिन्न सेयर बजारका कार्यक्रममा जाँदा पूर्ण अनलाइन कहिलेदेखि हुने हो भन्ने प्रश्नले प्राथमिकता पाउने गरेको छ । हाल वितरणमा आएको पहिलो...
अनलाइन प्रणालीमा ब्रोकरको खेल, समयमै आउन नदिने यस्तो झेल !
-भक्तराज रसाइली काठमाण्डौ । साउन १ गतेदेखि परीक्षणमा ल्याइएको पूर्ण स्वचालित अनलाइन कारोबार प्रणालीमा अभ्यस्त हुने बिषयमा लगानीकर्ताहरुले अनिच्छा किन देखाइरहेका होलान् ? अनलाइन प्रणालीको व्यग्रताको साथ प्रतिक्षा गरिरहेका लगानीकर्ताहरुमा परीक्षण प्रणालीमा अभ्यस्त हुने जाँगर किन आएन ? अनलाइन प्रणालीको परीक्षणमा अपेक्षा गरेअनुसार...
सेयर बजारमा नयाँ कुलमानको माग, अनलाइन परीक्षणमा लगानीकर्ताको न्यून सहभागिता
►भक्तराज रसाइली काठमाण्डौं । साउन १ गतेदेखि सुरु अनलाइन सेयर कारोबार प्रणालीको परीक्षणकालले लगानीकर्ताको ध्यान अझै खिच्न सकेको छैन । लगानीकर्ताहरु अनलाइन कारोबार प्रणालीको परीक्षणप्रति खासै सन्तुष्ट पनि देखिँदैनन् । अनलाइन कारोबार प्रणालीको परीक्षणमा सहभागी हुनलाई नेप्से तथा अन्य सरोकारवालाले लगानीकर्तालाई पटक–पटक आग्रह...
अनलाइनको परीक्षणमा अलमलिनु भयो ? यसो गर्नुहोस्
काठमाण्डौ । बजारमा पूर्ण स्वचालित अनलाइन कारोबार प्रणालीको परीक्षण चलिरहेको छ, तर यसको प्रगति सन्तोषजनक छैन । सिस्टममा आएका अनेकन गडबडी र झञ्झटिलो प्रक्रियाका कारण लगानीकर्ताले आफूसम्बद्ध ब्रोकरमा गएर यूजर नेम र पासवर्ड लिने चासो समेत निकै कम मात्र देखाएका छन् । लगानीकर्ताबाट अनलाइनको परीक्षण प्रणालीमा सहभागी हुन र नयाँ सिस्टममा...
अनलाइन कारोबार: सोध्ने धेरै, यूजर नेम र पासवर्ड लिने न्यून !
-भक्तराज रसाइली काठमाण्डौ । पूर्ण स्वचालित अनलाइन कारोबार प्रणालीको पूर्ण परीक्षण साउन १ गतेदेखि नै जारी छ । सोही मितिदेखि सिस्टम उपलब्ध ब्रोकरहरुमा गएर यूजर नेम र पासवर्ड लिई परीक्षण कारोबारमा सहभागी बन्न सकिने भन्दै नेप्सेले लगानीकर्तालाई आग्रह गरिरहेको छ । ब्रोकरहरुले समेत यो बिषयमा सकेसम्म लगानीकर्तालाई सूचित गरिरहेकै छन् । तर,...
‘लगानीकर्तालाई दशैं उपहार: पूर्ण स्वचालित अनलाइन कारोबार प्रणाली !’
-भक्तराज रसाइली काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले सेयर लगानीकर्ताहरुलाई दशैं उपहारको रुपमा पूर्ण स्वचालित अनलाइन कारोबार प्रणाली दिने भएको छ । नेप्सेका आइटी प्रमुख निरञ्जनसिंह नायकले बिजशालासँग कुरा गर्दै दशैं अगाडिबाट पूर्ण अनलाइन कारोबार प्रणालीलाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको बिजशालासँग बताएका हुन्...
कम्तीमा २ महिनापछि मात्र अनलाइन कारोबार !
काठमाण्डौ । पूर्ण स्वचालित अनलाइन कारोबार प्रणालीको साउन १ गते(हिजो)देखि परीक्षण थालिएको छ । अधिकांश ब्रोकरहरुले आफूसँग निकट लगानीकर्ताहरुलाई धमाधम यूजर नेम र पासवर्ड वितरण गरिरहेका छन् । लगानीकर्ताले समेत परीक्षणमा उपलब्ध एक्सेस लिई अनलाइन प्रणालीमा हात बसाउने कामको सुरुवात गरेका छन् । तर, साउन १ देखि थालिएको अनलाइनको परीक्षण सकिएर...
-मनोज बाबु काठमाण्डौ । कम्प्युटराइज्ड ट्रेडिङ सिस्टमको अवसान र अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टमको जन्मको एउटा महत्वपूर्ण कडी पूर्ण स्वचालित अनलाइन प्रणालीको परीक्षण भएको पहिलो दिन हो आज, अर्थात साउन १ गते । भण्डर कम्पनी वाइको प्रालिले बनाएर नेप्सेलाई हस्तान्तरण गरेको र नेप्सेले ब्रोकरलाई जिम्मा लगाएको अनलाइन प्रणालीको परीक्षणको खबरले...
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले पूर्ण स्वचालित अनलाइन सेयर कारोबार प्रणालीको पूर्ण परीक्षण आजदेखि सुरु गरेको छ । यसका लागि आफ्ना ब्रोकरमा गएर लगानीकर्ताले यूजर नेम र पासवर्ड लिनुपर्नेछ । नेप्सेले यसअघि सार्वजनिक गरेको तालिका अनुसार साउन १ गतेदेखि अनलाइन कारोबार प्रणालीको पूर्ण परीक्षण सुरु भएको हो । लगानीकर्ताले समेत अनलाइन...
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले पूर्ण स्वचालित अनलाइन सेयर कारोबार प्रणालीको पूर्ण परीक्षण साउन १ गतेदेखि गर्ने भएको छ । यसको पूर्वसन्ध्यामा ब्रोकरहरुले लगानीकर्तालाई यूजर नेम र पासवर्ड आएर लिन आग्रह गरेका छन् । नेप्सेले यसअघि सार्वजनिक गरेको तालिका अनुसार साउन १ गतेदेखि अनलाइन कारोबार प्रणालीको पूर्ण परीक्षण सुरु हुनेछ । यही...
नेप्सेले फेरि ढाट्यो लगानीकर्ता, अनलाइन प्रणालीको परीक्षण जेठदेखि मात्रै !
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले अनलाइन कारोबार प्रणाली सुरुवातको बिषयमा फेरि लगानीकर्तालाई ढाटेको छ । यसअघि २०७४ कात्तिक २१ गतेदेखि अनलाइन कारोबार प्रणाली सुरुवात गर्ने निर्णय गरेको नेप्सेले त्यसको ठीक एकदिनअघि पत्रकार सम्मेलन गर्दै आगामी जेठपछि परीक्षणको कामसुरु हुने र त्यसको केही महिनापछि मात्र कारोबार प्रणालीको पूर्ण...
कात्तिक तेश्रो सातादेखि लगानीकर्ताको हातमा माउस !
काठमाण्डौ । सेयर लगानीकर्ता तथा कारोबारीका लागि खुशीको खबर । बजारमा स्वचालित अनलाइन कारोबार प्रणाली कात्तिकको तेश्रो सातादेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी तयारी थालिएको छ । पूर्ण स्वचालित अनलाइन कारोबार प्रणाली निर्माणको ठेक्का पाएको वाइको प्रालिले नेपाल स्टक एक्सचेञ्जलाई भदौदेखि स्वचालित प्रणालीको परीक्षण सुरु गरी कात्तिकदेखि...
स्वचालित अनलाइन प्रणाली निर्माण तीव्र, वाइकोले दियो प्रस्तुती
काठमाण्डौ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड(नेप्से)का लागि स्वचालित अनलाइन कारोबार प्रणाली निर्माण गरिरहेको वाइको प्रालिले बुधबार प्रस्तावित प्रणालीको खाका प्रस्तुत गरेको छ । बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा वाइककोको तर्फबाट प्रणाली विकास व्यवस्थापक प्रदीप पद्मपाणीसहितको प्राविधिक टोलीले प्रस्तावित कारोबार प्रणालीका विविध पक्षमा...
आगामी पहिलो त्रैमासदेखि पूर्ण अनलाइन कारोबार प्रणाली
काठमाण्डौ । दोश्रो बजारमा पूर्ण स्वचालित अनलाइन कारोबार प्रणाली स्थापना तथा संचालनको मिति केही महिना पछि सरेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा लगानीकर्ताहरुले पूर्ण स्वचालित अनलाइन कारोबार प्रणालीको सुविधा पाउने स्पष्ट पारेको हो । यसअघि धितोपत्र बोर्डका...